“ဖွတ်မရ ( ကြံ့ ဖွတ် ) ၊ ဒါးမဆုံး ( တရား ဓမ္မ )” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဖြောင့်မတ်သော မီဒီယာ ဆိုရာဝယ်…
ပါဠိ ပါမောက္ခဆရာကြီး အဟ်မဒ်ကာစင်မ် »
“ဖွတ်မရ ( ကြံ့ ဖွတ် ) ၊ ဒါးမဆုံး ( တရား ဓမ္မ )”
မဘသများ ယခုအတိုင်း မြန်မာမွတ်ဆလင် ဆန့် ကျင်ရေး၊
ရိုဟင်ဂျာ ဆန့် ကျင်ရေး
Copy Right: Dr Ko Ko Gyi
If 969 Ba Tha continue with Anti Muslim and Anti-Rohingya rhetoric,
in 2015 election, not all of USDP “ဖွတ်” will lost but your religion or Dhamma would be gone (to the dogs).
i.e. ot only cannot get “USDP” (read ဖွတ်) but U could lost the Dahma. (Yes Chopper or Scripture )
During 8888 revolution….Bama Military Propaganda war-machines keep on spreading the false news that Communists were every where: some wearing white and green unifirms (referred to school-children and some wore the orange uniforms referring to monks….Now, after the cold war over…they tookachapter from the Clashes of Civilization and US led Christian West. They copy the Bogyman Islam…see: Moot Su, Moot Daung, Hajima Daw Suu to this “Muslim organized” student protest. SOB Min Aung Hlaing, Thein Sein…don’t shout “Wolf! Wolf! Wolf!” too much…If there wereareal invasion of Islamic Army led by UN and US…no one will believe you any more.
This entry was posted on November 17, 2014 at 8:24 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to ““ဖွတ်မရ ( ကြံ့ ဖွတ် ) ၊ ဒါးမဆုံး ( တရား ဓမ္မ )””
November 20, 2014 at 4:14 am | Reply
Actually BRAINLESS Ma Ba Tha is proving the world that PUNISHING AUNG THAUNG ALONE is not enough. Aung Thaung is the leader and financier of their group and UN and US need to pull ALL the 969 Ma Ba Tha leaders together with Aung Thaung to ICC.
(3) တောင်သာ မ.ဘ.သ ဆရာတော်မှ
ဒါန်ပေါက်ဝေရာမှ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် များဖြစ်….
November 22, 2014 at 12:55 pm | Reply
Thuzar Mdy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရဟန်းတို့ … မှီဝဲအပ် ပွါးများအပ် အကြိမ်များစွာ
ပြုအပ်သော သိမ်ဖျင်းသော စကားကို ပြောခြင်းသည်
သိမ်ဖျင်းသော စကားကို ပြောဆိုခြင်း၏
အပေါ့ဆုံး အကျိုးသည် လူဖြစ်သော သူအား
သူတစ်ပါးတို့ မနာယူအပ်သော စကားရှိသည်ကို ဖြစ်စေတတ်၏။
(၁ဝ – ဒုစ္စရိတဝိပါကသုတ်၊ ဒါနဝဂ်၊
အဋ္ဌကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်။ )
Moon Walker မိဘမဆုံးမသား ကိုမဘသလို့ခေါ်တယ်
ဝါဇီ လှမြင့် ဝါဇီ လှမြင့် ””’လိုရင် ဘုရားအလောင်း
မလိုရင် အဟိတ်တိရိစ္ဆာန် ကွ””’ခွီးးးးခွီးးး